ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကပ်ရောဂါခံစားရသော အုပ်စုများအား ပံ့ပိုးရန် e-voucher ကမ်ပိန်း သက်တမ်းတိုး - Xinhua News Agency
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံရန် စောင့်ဆိုင်နေသူများအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဘန်ကောက်၊ ဇူလိုင် ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကပ်ရောဂါကြောင့် ထိခိုက်ခဲ့သော ပြည်သူများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ပံ့ပိုးရန် အစိုးရဝန်ကြီးများအဖွဲ့က e-voucher ကမ်ပိန်းကို သက်တမ်းတိုးရန် ဇူလိုင် ၂၀ ရက်က ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ထိုင်းဘာသာစကားဖြင့် “များများသုံးလေ၊ အကျိုးရှိလေ” ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသော Ying Chai Ying Dai ဟု အမည်ပေးထားသည့် ကမ်ပိန်းသည် နိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်းအထိ နောက်ထပ်နှစ်လ သက်တမ်းတိုးလိုက်ကြောင်း အစိုးရ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Anucha Burapachaisri က ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါကမ်ပိန်းအရ ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ လက်ခံမည့်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် ၎င်း၏ ကုန်စည်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ ဝယ်ယူခြင်းအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ ဘတ် ၆၀,၀၀၀ အထိ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း Anucha က ပြောခဲ့သည်။
ယင်းကမ်ပိန်းမှ လူပေါင်း ၁.၄ သန်းကျော် အကျိုးကျေးဇူးရရှိခဲ့ကြောင်း Anucha က ဆိုသည်။ထိုင်းနိုင်ငံ အစိုးရသည် စီးပွားရေးနှင့် ပြည်သူများအပေါ် ရှည်ကြာနေသည့် ကပ်ရောဂါသက်ရောက်မှုများ သက်သာလျော့ပါးစေရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကြားမှ ဆောင်ရွက်ချက်များစွာ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသည် ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အဆိုးဝါးဆုံးလှိုင်းကို ခံစားနေရပြီး ရောဂါကူးစက်မှုနှင့် သေဆုံးမှု သိသိသာသာ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်းနှင့် အစိုးရက တင်းကြပ်သော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကန့်သတ်ချက်များ ထပ်မံ ဆောင်ရွက်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ဗဟိုဘဏ်ဖြစ်သော Bank of Thailand က ယခုနှစ် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအတွက် တိုးတက်မှုခန့်မှန်းချက်အား ၃ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၁.၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဇူလိုင် ၂၀ ရက်က ရောဂါအသစ်ဖြစ်ပွားသူ ၁၁,၃၀၅ ဦးနှင့် သေဆုံးသူ ၈၀ ဦးရှိခဲ့ရာ စုစုပေါင်း ရောဂါဖြစ်ပွားသူ ၄၂၆,၄၇၅ ဦးနှင့် သေဆုံးသူ အရေအတွက်မှာ ၃,၅၀၂ ဦးရှိခဲ့ကြောင်း COVID-19 အခြေအနေ စီမံခန့်ခွဲမှုစင်တာအရ သိရသည်။ (Xinhua)
BANGKOK, July 20 (Xinhua) — Thailand’s cabinet of ministers on Tuesday approved an extension of an e-voucher campaign to support the people and businesses affected by the pandemic.
The campaign, named the Ying Chai Ying Dai, which means “the more use, the more benefit” in Thai, will be extended for two more months to the end of November, according to government spokesman Anucha Burapachaisri.
Under the campaign, each eligible recipient will receiveasubsidy of up to 60,000 baht (about 1,827 U.S. dollars) in total for his/her purchases of goods or services, Anucha said.
Up to 1.4 million people are expected to benefit from the campaign, according to Anucha.The Thai government has rolled outaslew of measures amid efforts to cushion the impacts ofaprolonged pandemic on the economy and people.
The country is grappling with its worst wave of the outbreak, which has led toasharp surge in new infections and deaths, and prompted the government to further tighten coronavirus restrictions.
Due to the outbreak, the Bank of Thailand, the country’s central bank, has lowered its growth forecast for the economy to 1.8 percent this year, from the previous3percent.
On Tuesday, the country reported 11,305 new cases and 80 deaths, bringing the total number of infections and fatalities to 426,475 and 3,502, according to the Center for the COVID-19 Situation Administration. Enditem
Photo : Citizens wait to receive COVID-19 vaccines in Bangkok, Thailand, July 9, 2021. Tougher restrictions are being imposed in Thailand’s capital and surrounding provinces in an effort to curb rapidly increasing COVID-19 infections. The announcement came after Thailand reported its second-highest daily record of 9,276 new COVID-19 cases on Friday, with 3,116 cases detected just in Bangkok. (Xinhua/Rachen Sageamsak)